I-PATIO EHLANGANISIWEYO EBONAKALISIWEYO (I-PROS & CONS KUNYE NEEYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi I-Patio ehlanganisiweyo ebonakalisiweyo (i-Pros & Cons kunye neeYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokuyila sepatio esidityanisiweyo kunye neenzuzo kunye neendleko, iindleko kunye neengcebiso zokugcina.
unxibe ntoni njengondwendwe lomtshato
Yintoni i-Patio ehlanganisiweyo ebonakalisiweyo?
Umdibaniso obonakalisiweyo luhlobo oludumileyo lwekhonkrithi eyenziweyo ngokususa umaleko ongaphezulu ongaphezulu wesamente yokuveza ukuhombisa ingqokelela erhabaxa kumxube wekhonkrithi. Ezi zidityanisiweyo zinokudityaniswa kumxube wekhonkrithi okanye zihlwayelwe ngaphezulu.
Izinto eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuveza ikhonkrithi ehlanganisiweyo zibandakanya amatye okuhombisa, igrabile, ilitye elityumkileyo, ilitye le-ertyisi, iglasi etyunyuziweyo, i-quartzite, igranite, ilitye lekalika kunye neebasileti. Izidibanisi zinokulunga okanye zirhabaxa.
Ngenxa yesibheno esahlukileyo sobuhle, ukuhlala ixesha elide, kunye nokuxhathisa kwesikhonkwane esidityanisiweyo, kufanelekile ukuba isetyenziswe ezindleleni, kwiipavumente, kwiidrive, kumadama okuqubha, kumgangatho wamachibi, iiplaza, amanyathelo, nakwiipatiyo.
Ukubonakaliswa kwePatio Pros and Cons
Ukubonakaliswa kweendleko zePatio ezihlanganisiweyo
Ibonakalisiwe iAgregate Concrete Patio Sealer
Ukucoca okuBonisiweyo kwePatio ehlanganisiweyo
Zininzi iindlela zokwenza izinto ezidityanisiweyo:
Uhlobo oluqhelekileyo Yeyona ndlela iqhelekileyo ebandakanya ukuxubana okanye ukudibanisa amanqaku kumxube wekhonkrithi.
Ngaphezulu -Le ndlela ikwabizwa ngokuba kukugubungela ikhonkrithi apho izinto ezihlanganisiweyo zixutywe kwibhetshi yokugubungela ikhonkrithi emva koko yafakwa kwisilayidi esele ikhona. Le ndlela isetyenziselwa ukuphucula ikhonkrithi esele ikhona ngokufaka umaleko omncinci womxube wokudibanisa malunga ne-1 ukuya kwi-1.5 ye-intshi ubukhulu.
Imbewu -Le ndlela yenziwa ngokubeka izinto ezihonjisiweyo ngesandla kumphandle wekhonkrithi esandula ukugalelwa emva koko yadada kwikhonkrithi.
Ikhazimlisiwe -Indlela yakhe ixhaphake kakhulu ngaphakathi; ngokufanayo nomgangatho kunye nendlela yokuthambisa oku kwaziwa ngokuba yi-honing. Oku kufezekiswa ngokusila okanye ngesanti umaleko ophezulu wekhonkrithi ukufezekisa ilitye lendalo kunye nokugqitywa kwe-matte.
Ukufumana ukuveza ubungakanani kwikhonkrithi, kukho iindlela ezininzi zokwenza njalo- zihlala zenziwa ngokuhlamba okanye ukutshiza ngamanzi kunye nokuxubha okanye ukukhuhla umaleko omncinci womhlaba wokuncamathisela wesamente de kube kudityanisiwe.
Enye indlela kukusebenzisa into ecekeceke yokutshiza kumphezulu wesamente ukuze unciphise inkqubo yokuphilisa ngelixa ikhonkrithi isenza lukhuni. Emva kweeseti zekhonkrithi, uluhlu oluphezulu lwesamente lucocwa kusetyenziswa isher yokucinezela okanye uyikhuhla usebenzisa umtshayelo kunye namanzi avela kumbhobho wegadi.
Ukuba ufuna ukugcina umbala kunye nobume be-aggregate ebonakalayo, ungabhengeza umyinge ngokusebenzisa i-blastive blossy efana ne-sandblasting okanye ukudubula xa kuqhutywe ikhonkrithi kwaye iqine.
Ukubonakaliswa kwePatio Pros
Tshatisa isimbo sendlu yakho -Ukukhetha udibaniso olubonakalisiweyo njengokhetho lwekhonkrithi lwepatio yakho, unokufezekisa izibonelelo ezininzi ezinjengekhonkrithi eyenziwe ngokwezifiso kwaye unokudibanisa kakuhle kwaye utshatise nawuphi na umhombiso wangaphandle. Ngenxa yobume bayo obukhethekileyo, obuhle, bunokunyusa isibheno sendlu yakho.
Yomelele kakhulu -Ipatio ehlanganisiweyo ebonakalisiweyo ihlala ixesha elide kuba inesidima sekhonkrithi, inokuthatha iminyaka engama-40 okanye ngaphezulu. Inokugqitywa okuhlala ixesha elide ngakumbi kunaye iipampu zekhonkrithi ezinesitampu loluphi olunye ukhetho.
Inceda ukuthintela ukutyibilika -Ibambelela kakuhle kutrafikhi enzima kuba umphezulu ubhalwe ngombala kwaye unomgangatho wokumelana neskid ngakumbi kwimeko ezimanzi ezenza ukuba indawo yakho yepatio ikhuseleke kwaye inciphise umngcipheko wokutyibilika nokuwa.
Ukuma kwimeko yezulu engentle -Ukuhlanganiswa okubonisiweyo kunokumelana nokuvezwa kwazo zonke izinto kunye nemozulu embi.
Ulondolozo olungephi - Ikwafuna ulondolozo olulinganiselweyo ngaphandle kokucoca ngamanye amaxesha ngamanzi kunye nokutywina kwakhona rhoqo kwiminyaka emithathu ukuya kwemihlanu ukukhusela kunye nokugcina ukubonakala kwayo kukhazimla.
Ixabiso eliphantsi - Ukusebenzisa udibaniso lwepatio kunokubiza iindleko ukuyifaka ngenkqubo elula kunye neendleko ezifanelekileyo.
Ukubonakaliswa kweAgregate Consumer Cons
Nangona ipatio ehlanganisiweyo ebonakalayo inokuba yodwa kwaye inokubhenela ngakumbi kubuchwephesha, ikwanazo nezinto ezingalunganga ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokufaka umndilili ocacileyo kwipatiyo yakho.
Unokuqhekeka ukuba umaleko ophezulu wekhonkrithi wonakele -Ukufakelwa komndilili ocacileyo kuzisa umceli mngeni wawo kwaye umntu kufuneka asebenze ngononophelo ukuze angabeki ngaphezulu kokudityaniswa kwayo nokuba yeyiphi na indlela ayisebenzisayo.
Umdibaniso obonakalisiweyo unokuqina kwaye uhlale ixesha elide njengekhonkrithi, ngamatye okuhombisa akumaleko aphezulu athambekele ekonakaleni.
Zininzi izinto ezinokwenza ukuba ezi zinto zidityanisiweyo zidityanisiwe zisemngciphekweni wokonakaliswa njengokuhamba kwezinto ezinzima, ukonakaliswa kwamanzi kunokukhulula okanye kukhuphe amatye amancinci kushiye imingxuma erhabaxa kumphezulu; Amanzi anokulwenza buthathaka ubumbano phakathi kwekhonkrithi kunye nokudityaniswa.
Kunzima ukulungisa -Ukulungisa iintanda kumdibaniso ocacileyo kunzima kakhulu kuba ukudibanisa umphezulu ongqinelwanga kunye nawo wonke umgangatho yeyona nto inzima.
Kunzima ukucoca kunye nokugcina Okokugqibela, ukucoca nolondolozo lwee-aggregates kwezi iintlobo zeepatios azikho lula njengoko zibonakala. Kuya kufuneka ukhuhle ngenene ngebrashi yocingo kwaye usebenzise umbhobho onamandla ukuhlamba zonke iintlobo zobumdaka obudibanisene phakathi kokuhlanganisiweyo okuveziweyo.
I-avareji yexabiso lesizwe lezixhobo zokufaka ipatio esecaleni yeekhonkrithi ezixabisekileyo yi- $ 2.04 ngeenyawo zenyawo nganye; Ukujikeleza $ 1.90 ukuya kwi- $ 2.18.
Inkqubo ye- Isisiseko Ixabiso lezixhobo zepatio ezihlanganisiweyo ze-100 yeenyawo zenyawo zinokubiza malunga ne- $ 125 ukuya kwi-150 yeedola ngelixa i Eyona ilungileyo Ixabiso lezinto eziphathekayo zekhonkrithi zeendawo ezili-100 zeenyawo zendawo zingabiza i- $ 200 ukuya kwi-235 zamaRandi.
Inkqubo ye- Isisiseko indleko yokufakwa kwekhonkrithi ehlanganisiweyo ye-100 yeenyawo zenyawo zinokubiza malunga ne- $ 150 ukuya kwi- $ 175 ngelixa Eyona ilungileyo Ixabiso lokufaka ikhonkrithi ehlanganisiweyo ye-100 yeenyawo zenyawo zinokubiza malunga ne-300 ukuya kwi-500 yeedola.
Ixabiso eliphakathi labasebenzi kunye nezinto zokusebenza ngonyawo wesikwere zii-10.15 zeedola kwaye zinokubiza malunga ne-9.11 ukuya kwi-11.18 yeedola.
Kwimeko yepatio yeenyawo ezili-100 eziqhelekileyo, inani labasebenzi kunye nezinto eziphathekayo zinokubiza i- $ 275 ukuya kwi-325 yeedola Isisiseko Umdibaniso weepatio zabasebenzi kunye nezixhobo; Ngelixa i Eyona ilungileyo Iipatiyo ezihlanganisiweyo zekhonkrithi zizonke iindleko zinokuhla ukusuka kwi-500 ukuya kwi-735 yeedola kuzo zombini abasebenzi kunye nezinto zokusebenza.
Umdibaniso ocacileyo odityanisiweyo kufuneka utywinelwe ukuwukhusela ekutshatyalalisweni, ekuvutheni uthuli, ekwenziweni komkhenkce, ekonakaleni komkhenkce, amabala, ukubola; Ikwonyusa umbala wokudityaniswa kwaye iphakamise ubunzulu bobutyebi kunye nobutyebi.
Xa ukhetha i-sealer ye-aggregates edityanisiweyo, kukho izinto ezithile ekufuneka uzijongile. Qiniseka ukuba isityikitya osikhethileyo asityheli kwaye siyamelana ne-UV, itywina kufuneka ligxothe ioyile, igrisi, amanzi kunye namabala.
Itywina kufuneka libonelele ngokukhanya okumanzi okuphezulu-oku kuyinto enzulu kwaye ityebise umbala wokudityaniswa.
Zimbini iintlobo ezizezona zibalaseleyo zokutywina kumdibaniso ocacileyo- Amanzi aXineneyo aKhonkrithi aManzi kunye neeArhente zeKhonkrithi zeAcrylic.
AbaTyikitya beKhonkrithi abaGxotha amanzi -Amanzi aXineneyo aKhonkxiweyo aManzi awayi kuyitshintsha inkangeleko yekhonkrithi, isebenza ngaphantsi komphezulu kwaye ihlala iminyaka esi-7 ukuya kweli-10. Olu hlobo lokutywina luphinda lugxothe amanzi angaphezulu kwaye linciphise ukubola kunye nokonakala; kwaye inokusetyenziswa kwikhonkrithi enyangiweyo nengaqinisekanga.
Ukutywina kweeKhonkrithi ze-Acrylic -Kwelinye icala, iiAcrylic ezityunjiweyo zeKhonkrithi zonyusa ukudityaniswa ngenkangeleko emanzi okanye ukuqaqamba ngelixa kushiya ifilimu ebonakalayo ebonakalayo kwaye ihlala iminyaka eyi-1 ukuya kwemi-5. Olu hlobo lokutywina lukhusela umphezulu ngokuchasene nebala, uyeke uthuli kunye nokonakala; kwaye ngokufanayo inokusetyenziswa kwikhonkrithi ephilisiweyo nenganyangekiyo.
Kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba yonke intsalela yesamente isuswe xa kufakwa isitywina kwi konkrithi entsha ukuthintela ukutywina ubumbeko olumhlophe olubukeka lubisi ngaphezulu.
Ukuba ufuna ukufaka isicelo sokutywina kumdibaniso osele ukhona, qinisekisa ukuba umphezulu ucoceke ngokupheleleyo kwaye awunamafutha, igrisi, ubumdaka namabala ngaphambi kokufaka isitywina.
Njengoko ixesha lihamba, ipatio edityanisiweyo iya kungcola kuba iya kuba kuqokelela ukungcola, uthuli kunye nenkunkuma.
Ukugcinwa rhoqo kunye nokucocwa kubaluleke kakhulu ekukhuseleni ipatio edibeneyo kunye nokugcina ukubukeka kwabo okuhle. Ukukunceda koku, sidibanise ulwazi malunga nendlela yokucoca iipatios ezidityanisiweyo ngaphandle kokubangela umonakalo.
Ngokufanelekileyo, ukutshayela ipatio yakho ubuncinci kanye ngemini kuyigcina ikhululekile eluthulini, kubumdaka nakwimvuthuluka. Ukufumana amabala amdaka kunye nokungcola okunenkani, ukuhlamba umphezulu ngamanzi usebenzisa umbhobho wegadi ngumbono olungileyo.
Ukuphelisa amabala eoyile kunye negrisi, sebenzisa iwasha yoxinzelelo oluphezulu ngamanzi ashushu ukunceda ukuphakamisa ioyile kunye negrisi ngaphezulu kwaye usebenzise isisombululo sokucoca esiya kuthi sichaphazele ibala; ngokwenza njalo, ivumela ioyile kunye negrisi ukuba zihlambe ngokulula.
Ngokwesiqhelo, isisombululo sokucoca siyakubiza ulwelo lokuhlamba izitya okanye isoda yokubhaka; kodwa ioyile enzima kunye negrisi inokufuna i-degreaser yorhwebo-kwinqanaba ukwenza lo msebenzi.
Nawuphi na umswakama oshiyekileyo ukuba uzinze kwipatiyo yakho, ngelo xesha elinokukhanya okuncinci kwelanga kunokuqala ngokulula ukwenza ukungunda kunye ne-algae. Ezi zingunda kunye ne-algae kufuneka zicocwe ngokusebenzisa isicombululo semichiza kwaye uzihlambe ngesicoci soxinzelelo oluphezulu.
Kubalulekile ukuba nanini na xa usebenzisa isisombululo sokucoca imichiza, ipatio yakho edibeneyo kufuneka ihlanjululwe kwaye ivumele umphezulu ukuba wome ngokupheleleyo.
Siyathemba ukuba sivelise kuwe uninzi lwezinto onokukhetha kuzo zokubandakanya ukubonakaliswa okuhlanganisiweyo kwipatiyo yakho kwaye naphina apho ubona kufanelekile kubume bekhaya lakho.
Sebenzisa ii-aggregates kwi-patio yakho lukhetho olukhulu-kuyabhetyebhetye kakhulu ukuba ungafumana ubuchule bokwakha kunye nokumila.
Ungafezekisa uyilo olunomdla kakhulu kunye nezitayile zoyilo ngokudlala ujikeleze imibala kunye nezinto ezihlanganisiweyo kunye nobukhulu kunye nemilo yomdibaniso.
Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela yethu izimvo zepatio zamatye iphepha.
iglasi yeengcango zepryry
ilokhwe yomtshato yomtshato wenkundla
Indawo yomtshato eNew York
imiphezulu yeetafile zwi mhlophe